Vodafone dia manamafy ny fivezivezena 5G any Eropa amin'ity fahavaratra ity | Androidsis
Vodafone dia hitondra 5G any Eropa amin'ity fahavaratra ity
Eder Ferreno | | About us, Mpikirakira telefaona
Firenena sasany Niaraka tamina tambajotra 5G miasa tanteraka izy ireo nandritra ny iray volana mahery. Korea atsimo no voalohany, izay efa misy olona ana hetsiny mampiasa azy. Misaotra ny fandefasana ny Galaxy S10 amin'ny kinova misy 5G. Ireo finday ireo dia manomboka tonga any Eropa, saingy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy vonona ny tambajotra 5G. Na dia eo aza ny Vodafone dia hitondra fanovana amin'ity lafiny ity tsy ho ela.
Nanamafy izany ny mpandraharaha manomboka amin'ity fahavaratra ity amin'ny fametrahana 5G any Eropa. United Kingdom no firenena voalohany hanaparitahan'ny Vodafone ity tambajotra ity. Ny tanàna sasany ao amin'ny firenena dia hanana fidirana amin'izany. Ho fanampin'izay, misy ihany koa ny fiovana mandehandeha ho an'ny mpampiasa hafa.
Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool ary Londres no tanàna nofidian'i Vodafone hampiasa 5G any Angletera. Ny orinasa dia misafidy ny tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena amin'ity dingana voalohany ity. Antenaina ny 3 jolay izao vao miditra ny firenena, araka ny efa nolazain'ny mpandraharaha.
Ankoatr'izay dia voamarina fa amin'ireo daty ireo hanana katalaogy finday misy 5G izy ireo. Ny telefaona voamarina voalohany dia ny Galaxy S10 5G, ny Xiaomi Mi MIX 3 5G ary ny Huawei Mate 20X 5G. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mividy ireo modely ireo any amin'ny Fanjakana anglisy amin'ny fomba ofisialy.
Vodafone dia manamafy ihany koa fa ny fidirana 5G dia zavatra izay hisy vokany any amin'ny firenena hafa. Amin'ity tranga ity dia hisy fiatraikany amin'ny roaming, amin'ny fomba tsara. Hatramin'i Alemana, Italia ary Espana dia hanana fidirana amin'ny roaming amin'ity fifandraisana vaovao ity, izay tokony hiantoka ny fizahana haingana kokoa.
Andrasana ihany koa amin'ny fahavaratra, na izany aza Vodafone dia tsy nanamafy daty momba an'io amin'izao fotoana izao. Saingy toa tokony ho ofisialy ihany koa ao anatin'ny roa volana. Noho izany dia misy herinandro vitsivitsy mialoha miaraka amin'ny asa marobe ho an'ny mpandraharaha, miaraka amin'ny fametrahana 5G any Eropa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Vodafone dia hitondra 5G any Eropa amin'ity fahavaratra ity
Honor dia manamafy ny modely fakan-tsarin'i quad aoriana ho an'ny sainam-pirenena Honor 20
Redmi K20: io no ho anaran'ny avo lenta an'i Redmi